ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာဝယ်ရင်းပတ်ရင်းနဲ့ ဘယ်ဆိုင်စားရမလဲ စဉ်းစားရခက်နေသူတွေအတွက် ? ? – FoodiesNavi
By yin sandi On April 25, 2018 0
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ၊ ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းတွေနဲ့ အသစ်အဆန်းပစ္စည်းတွေပေါများလှတာကြောင့် မိန်းကလေးတွေစိတ်တိုင်းကျ ရှော့ပင်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ရှာရင်းပတ်ရင်းနဲ့မောပန်းပြီး ဗိုက်ဆာလာပြီဆိုရင် စားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကို အလျင်စလိုရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေပေါများပေမယ့် ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမှာစားကြည့်မှ အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ အက်မင်တို့မနေ့က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲပတ်ရင်း စားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ အရသာလည်းကောင်းသလို ဈေးနှုန်းလေးလည်းသင့်တာကြောင့် အစားတစ်လိုင်းတို့ကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်လေးကတော့ Junction City ဘက်ကနေလာရင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တန်းဘက်မှာပါ။ ဆိုင်နာမည်ကတော့ “ပိတောက်မြိုင်” အဓိကရောင်းတာက ဘဲပေါင်းကြက်ပေါင်းဆီချက်ဆိုပေမယ့် အက်မင်တို့ကဆီချက်သိပ်မကြိုက်လို့ တခြား Menu တွေပဲမှာစားဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးမှာစားဖြစ်တာကတော့ ဖက်ထုပ်ကြော်-
ဖက်ထုပ်ကြော်လေးကတော့ မာတောင့်တောင်ကြီးဖြစ်မနေဘဲ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးနဲ့တော်တော်လေးဝါးလို့ကောင်းသလို အထဲမှာလည်းကြက်သားမွမွလေးတွေကို တရုတ်နံနံလေးတွေနဲ့ရောပြီး ပြည့်ပြည့်သိပ်သိပ်လေးထုပ်ပေးထားတာကြောင့် တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ တွဲစားရတဲ့ Sauce ကို ready-made sweet chilli ထည့်ပေးထားတာကတော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး။ မန်ကျည်းချဉ် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးဆို ပိုစားကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။
ပဲပြားချဉ်စပ်ကတော့ ပိတောက်မြိုင်မှာအက်မင်အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ သုံးထားတဲ့ပဲပြားက စျေးထဲမှာရောင်းတဲ့ပဲပြားတုံးအရသာမဟုတ်ဘဲ ဂျပန်တို့ဟူးလိုအိအိလေးနဲ့ သုံးထားတဲ့ဟင်းအနှစ်ကလည်း အရမ်းမစပ်ဘဲ ဆားပြားသင့်ပြီး အက်မင်ခံတွင်းနဲ့တော်တော်လေး အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်တယ်ပြောရမယ်။ ကြက်သွန်နီဖတ်များများသုံးထားတော့ စားရတာမွှေးမွှေးလေးရယ်။ အရသာကလည်းပဲပြားတင်မကဘူး ပန်းဂေါ်ဖီတွေပါ အနှစ်လေးတွေစိမ့်ဝင်နေပြီး စားလို့ကောင်းနေရောပဲ။
ကန်စွန်းရွက်သုပ်ကတော့ ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း အစာပလာစုံချက်ပဲ။ ကန်စွန်းကလည်း မနူးလှမစိမ်းလှဘဲ တထုပ်ထုပ်လေးနဲ့ . အချဉ်စူးစူးလေးသုပ်ပေးထားတော့ စားလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ ချိုချဉ်ငံစပ်တိတိကျကျလေးနဲ့ စားရတာတော်တော်လေးအစပ်အဟပ်တည့်တယ်။ အသီးအရွက်ကြိုက်သူတွေအတွက် လုံးဝအကြိုက်တွေ့မယ့် ကန်စွန်းရွက်သုပ်လေးပါ။
ကြေးအိုးဆီချက်ကိုတော့2Star လောက်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကြာဇံဖတ်အရသာက တော်တော်လေးကောင်းပေမယ့် အသားလုံးကတော့ တော်တော်လေးဖွာပြီးပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နိုင်တယ်။ အပေါ်ယံကအသားတွေလည်း အရသာသိပ်မရှိဘူး ။ ဒီဆိုင်ကိုသွားစားဖြစ်ရင်တော့ အက်မင်တစ်ယောက်ထဲသဘောပြောရရင် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်း(၃၀၀၀)ကျပ်နဲ့ မတန်လှဘူး ။ အပြင်ပန်းပုံလေးက တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှ်ိပြီး အရသာကျ ခံတွင်းမတွေ့တော့ တော်တော်လေးရင်ခံသွားတယ်။
သင်္ဘောသီးထောင်းကတော့ ရှယ်ပဲဗျို့..ယိုးဒယားစတိုင်ကိုမှ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်မှာမပါမဖြစ်တဲ့ စိမ်းစားငပိလေးနဲ့ထည့်သုပ်ပေးထားတော့ မြန်မာခံတွင်းနဲ့တော်တော်လေးလိုက်ဖက်တယ်။ အစာပလာတွေလည်းများတော့ တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပြီး အရည်လေးတွေပါ ဇွန်းနဲ့ခပ်သောက်လိုက်ရင် ချိုချဉ်စပ်လေးနဲ့တော်တော်လေး အရသာမိုက်တယ်။
လက်ဖက်သုပ်ကတော့ ဘယ်ဆိုင်သွားသွားကို မှာစားဖြစ်တဲ့အသုပ်လေးပါ။ လက်ဖက်သုပ်ကတော့ စားနေကျဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးအရသာကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။
စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်လေးက တော်တော်သောက်လို့ကောင်းတယ် ။ အချဉ်အချိုအနေတော်လေးနဲ့ ဗိုက်ကားအောင်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာ အအီပြေသွားစေဖို့ တော်တော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သံပုရာရည်ကတော့ သံပုရာသီးညစ်တဲ့သူညံ့လို့လားမသိ နည်းနည်းသက်တယ်။ သိပ်မကြိုက်ဘူး။
ရွှေရင်အေးကတော့ ပိတောက်မြိုင်ဘေးကပ်ရပ် ရွှေမျက်မှန်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကမှာသောက်တာ။ ပူပူအိုက်အိုက်ရာသီဥတုအတွက်လည်း ရင်ကိုတကယ်အေးမြသွားတာပဲ။ အချိုတွေတအားမများဘဲ စိမ့်စိမ့်အေးအေးလေးနဲ့ တော်တော်လေးအမောပြေတယ်။ မှာထားတာတွေမရောက်သေးခင် ရွှေရင်အေးလေးနဲ့အမောဖြေလိုက်တာ ပူတာလေးတောင်သက်သာသွားတယ်။
ကဲဒီတော့ ဗိုလိချုပ်ဈေးကိုရောက်လို့ စျေးဝယ်ရင်းဗိုက်ဆာလာပြီဆိုရင် ဆိုင်ရွေးချယ်နေစရာမလိုတော့ဘဲ တစ်ခါတည်းသာဝင်စားလိုက်တော့နော်။